काठमाडौँ । वरिष्ठ साहित्यकार ठाकुरप्रसाद गुरागाईँ (म्यान्मा)लाई २०७९ सालको वसुन्धराश्री पुरस्कार तथा कलाकार थानबहादुर रावल (म्यान्मा)लाई २०७९ सालको मानश्री पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । विस्तृतमा
ढोका बन्द गर्यौ भने त दिलको, ए मार्ग काँ खोज्नु म ? दैलो बन्द गर्यौ भने त मनको, गन्तव्य काँ खोज्नु म ?
धरान। आफ्नो कवि छोराको स्मृतिमा पुस्तकालय सञ्चालन गरिरहेका पूर्णबहादुर गुरुङको जीवनकथामा बनेको डकुमेन्ट्री फिल्म ‘उर्मि’ दक्षिण एसियाली फिल्म फेस्टिभल ‘फिल्म साउथ एसिया २०२२’मा छानिएको छ। फिल्ममा समाजका लागि पुस्तक पढ्न प्रेरणा दिईरहेका वृद्ध गुरुङलाई नै प्रस्तुत गरिएको छ।
वासिङ्टन डीसी। प्रवासमा जन्मिएका र हुर्किएका १८ वर्ष मुनिका भार्इ बहिनीहरुलाई नेपाली भाषा, साहित्य, कलाका विविध आयाममा आकर्षण र प्रेरणा दिने उदेश्यले अनेसास बाल–तारा’ पुरस्कारको स्थापना गरिएको छ। अनेसासको मासिक बाल कार्यक्रम ‘बाल–तारा’ मार्फत प्रतिभाको खोजीगर्दै यो पुरस्कारको परिकल्पना गरिएको हो।
शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठानबाट भैरवबहादुर थापा सम्मानित
काठमाडौँ। वरिष्ठ निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको ९५ औँ जन्मजयन्ती समारोह उनको योगदानमाथि चर्चा गर्दै सम्पन्न भयो। शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नृत्यकारविद् तथा लेखक भैरवबहादुर थापालाई प्रतिष्ठानका तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले सम्मान गरेका थिए।